Volavolan-dalàna momba ny ara-dalàna marijuana any Wisconsin - volavolan-dalàna hananganana ara-dalàna ny rongony
Volavolan-dalàna momba ny ara-dalàna marijuana any Wisconsin
Mpitondra Wisconsin maromaro no nanambara a volavolan-dalàna hanafoanana tanteraka ny marijuana tany amin'ny fanjakana tamin'ny herinandro lasa. Ity volavolan-dalàna ity dia ahafahana mampiasa fialantsasatra ara-dalàna amin'ny rongony ho an'ny olon-dehibe, ary handoa hetra amin'ny fivarotana rongony amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba hetra ny hetra ao amin'ny fanjakana. Io volavolan-dalàna io koa dia hahafahan'ny olona hamboly zava-maniry rongony ao an-trano.
Ny senatera Madison Melissa Agard dia nilaza fa ny fanaovana ara-dalàna dia mety hitondra $ 165 tapitrisa isan-taona na mihoatra amin'ny fidiram-bola. Nanambara ihany koa izy fa, raha ny fanadihadiana natao tamin'ny taona 2019, 59% ny olona any Wisconsin no manohana ny fanomezana ara-dalàna ny rongony.
Amin'ny fanoherana mahery vaika avy amin'ny loholona repoblikana -izay nanakana ny andrana toy izany taloha- tsy fantatra na ho lany ny fandraisana andraikitra. Fa mandritra izao fotoana izao, ity misy topy maso kely amin'ny fanandramana vaoavao farany an'i Wisconsin ho ara-dalàna ny rongony.
Fanomezana ara-dalàna ny Marijuana fialamboly
Ny volavolan-dalàna naroso dia mikendry ny hamela marijuana fialamboly. Manamboatra, mizara, na manatitra marijuana; manana marijuana amin'ny fikasana hanamboatra, hizara, na hanatitra azy; ny fananana, na ny fampiasana fitaovana fampiasana zava-mahadomelina dia tsy ara-dalàna avokoa araka ny lalàna ankehitriny.
Tsy misy fiatraikany amin'ny lalàna federaly io volavolan-dalàna io. Ny volavolan-dalàna dia manova ny lalàm-panjakana hamelana ny mponina any Wisconsin izay 21 taona farafahakeliny, na marary mendrika, hanana marijuana tsy mihoatra ny roa grama ary hamela ny nonresident any Wisconsin izay farafaharatsiny 21 taona tsy hanana intsony. mihoatra ny iray ampahefatry ny marijuana.
Inona ny marary mahafeno fepetra ary inona ny fetran'ny fananana?
Ny marary mahafeno fepetra, araka ny voafaritry ny lalàna, dia olona iray izay voan'ny dokotera ho manana na miaritra aretina na fitsaboana malemy ary 18 taona farafahakeliny.
Araka ny volavolan-dalàna, ny olona manana mihoatra ny fehezanteny farany azo avela - nefa tsy mihoatra ny 28 grama rongony - dia iharan'ny famonoana sivily hatramin'ny $ 1000 na fanagadrana hatramin'ny 90 andro.
Fahadisoana A Class B no iampangana an'izay manana rongony mihoatra ny 28 grama. Ary raha mandray andraikitra hanafina ny marijuana ananany io olona io, mametraka rafitra hampandrenesana azy momba ny fisian'ny mpampihatra lalàna, fomba fampitahorana, na fandrika mety handratra na hahafaty olona iray, io olona io dia meloka noho ny heloka vitako tao amin'ny kilasy I.
Io volavolan-dalàna io koa dia manafoana ny fandrarana ny fananana na hampiasa zava-mahadomelina mifandraika amin'ny fihinanana rongony
Momba ny heloka mifandraika amin'ny marijuana
Ny lalàna koa dia mametraka fomba fiasa ho an'ireo izay voaheloka noho ny fihetsika iray izay voararan'ny lalàna noho ny volavolan-dalàna. Raha toa ka efa mandefa fe-potoana na mandritra ny fotoam-pitsarana ny olona iray, dia mety hangataka amin'ny tribonaly izy mba hafoina ny fanamelohana azy ary hofoanana ny firaketana.
Raha nisy olona nanefa fotoana na vanim-potoana fanandramana noho izany faharesen-dahatra izany, dia mety hangataka amin'ny fitsarana izy mba hamongorana ny firaketana na, raha ilaina izany, dia novaina ho amin'ny heloka kely kokoa. Izay firaketana izay voafafa ao ambanin'ny volavolan-dalàna dia tsy heverina ho fanamelohana araka ny lalàna fanjakan'ny fanjakana na federaly na inona na inona antony.
Tombontsoa amin'ny asa
Araka ny lalàna ankehitriny, ny olona iray dia mety tsy mendrika amin'ny fandoavana fiantohana tsy an'asa raha toa ka voaroaka noho ny fitondran-tena ratsy na ny hadisoana lehibe.
Ny volavolan-dalàna vaovao dia manambara mazava tsara fa ny fampiasan'ny mpiasa marijuana eny an-tranon'ny mpampiasa mandritra ny ora tsy fiasana dia tsy fitondran-tena ratsy na fahadisoana lehibe, raha tsy omena alalana amin'ny famerana lalàna iray ny asa iray.
Ankoatr'izay, araka ny lalàna efa misy, ny DWD dia takiana amin'ny famolavolana programa hitsapana ireo mpangataka izay mangataka ny fandoavam-bola UI noho ny fisian'ny zava-mahadomelina voarara, araka ny famaritan'ny lalàna federaly. Raha manandrana miabo ny zava-mahadomelina iray ny mpangataka dia mety holavina ny tombotsoan'ny UI, iharan'ny fanarahana manokana sy fetrany manokana.
Ny fepetra vaovao dia manafaka ny THC amin'ity fepetra fitiliana ity. Vokatr'izany, ny olona iray manaporofo fa tsara amin'ny THC dia mety tsy holavina UI fandoavam-bola araka ny lalàna.
Fanafahana fitsapana zava-mahadomelina
THC, ao anatin'izany ny rongony, dia madiodio amin'ny fitsapana zava-mahadomelina ho an'ny fandaharam-panampiana ho an'ny daholobe ambanin'ny lalàna vaovao. Mpandray anjara amin'ny programa Wisconsin Works (W2) asa fanompoana eo amin'ny fiaraha-monina na fametrahana tetezamita na programa FoodShare, izay voaheloka ho manana, mampiasa, na mizara fizarana iray voafehy dia tsy maintsy manolotra fitsapana zava-mahadomelina voafehy ho toy ny fepetra azo ekena.
THC dia voahilika amin'ny fomba fitsaboana sy programa rehetra araky ny lalàna.
Fahazoan-dàlana hamokatra, hanodinana ary hivarotra marijuana fialamboly
Ny lalàna dia mametraka fombafomba hahazoana fahazoan-dàlana voaantso amin'ny alàlan'ny volavolan-dalàna momba ny fambolena, fanodinana ary fivarotana rongony ho an'ny tanjona fialamboly. Ity volavolan-dalàna ity dia mametraka ihany koa ny fandoavan-ketra haba amin'ny tombontsoa manao asa eto amin'ity fanjakana ity. Enimpolo isanjaton'ny vola miditra amin'ny hetra no apetraka ao amin'ny tahiry iray hafa fantatra amin'ny anarana hoe "fonds d'exploitation des komunitas".
Ny volavolan-dalàna dia mitaky olona iray hahazo fahazoan-dàlana samihafa Departemantan'ny vola miditra any Wisconsin (DOR) mamokatra, manodina, mizara, na mivarotra marijuana, ary mitaky ny mpamokatra sy ny mpikirakira marijuana hahazo fahazoan-dàlana fanampiny avy amin'ny fanjakana. Departemantan'ny fambolena, varotra ary fiarovana ny mpanjifa (DATCP).
Ny fepetra ahazoana ireo fahazoan-dàlana ireo dia miovaova arakaraka ny fanomezan'ny DOR na DATCP ny fahazoan-dàlana, fa amin'ny ankapobeny, ny olona iray dia mety tsy mahazo fahazoan-dàlana toy izany raha tsy mponina ao amin'ny fanjakana izy, latsaky ny 21 taona, na efa voaheloka noho ny heloka bevava sasany.
Ankoatr'izay, ny tompon'ny fahazoan-dàlana DOR dia tsy mahazo miasa ao anatin'ny 500 metatra amin'ny sekoly, kianja filalaovana, ivon-toerana fialamboly, toeram-pitaizana zaza, zaridem-bahoaka, tranom-pitateram-bahoaka, na fitahirizam-boky, ary ny manana fahazoan-dàlana DATCP dia tsy mahazo miasa ao anatin'ny 500 metatra miala ny sekoly.
Ny olona iray manana fahazoan-dàlana DOR dia tsy maintsy manaraka ny masonkarena manokana. Ny mpangataka fahazoan-dàlana manana mpiasa 20 na mihoatra dia tsy mahazo fahazoan-dàlana avy amin'ny DATCP na DOR raha tsy hoe manamarina ny mpangataka fa nanao fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ny fikambanan'ny mpiasa iray izy, araka ny lalàna.
Ny fifanarahana momba ny fandriam-pahalemana dia mandrara ny fikambanan'ny mpiasa sy ny mpikambana ao aminy tsy hitsabatsabaka amin'ny olona manao raharaham-barotra any Wisconsin, ary mandrara ny mpangataka tsy hiditra an-tsehatra amin'ny fikasan'ny fikambanan'ny mpiasa hifandray, handamina ary hisolo tena ny mpiasan'ny mpangataka, izy io koa dia manome ny fikambanan'ny mpiasa fidirana amin'ny faritra iasan'ny mpiasa mifanakalo hevitra momba ny zon'ny asa sy ny fepetra sy fepetra momba ny asa.
Ny fanjakana sy ny governemanta eo an-toerana dia voarara tsy hangataka fifanarahana fandriampahalemana ho an'ny mpiasa ho toy ny fepetra amin'ny fahazoan-dalàna mifehy. Tsy mihatra amin'ny fepetra takian'ny volavolan-dalàna io fandrarana io.
Ho fanampin'izay, ny fepetra dia manome baiko fa ny DATCP sy ny DOR dia mampiasa rafitra fanaovana isa fifaninanana handinihana izay mpangataka mendrika hahazo alalana. Ny sampana tsirairay dia tsy maintsy manome fahazoan-dàlana ho an'ireo mpangataka manana isa ambony indrindra izay manome toky fa:
Arovy tsara ny tontolo iainana,
Manolora asa ho an'ny fianakaviana eo an-toerana,
Tandrovy ny fiarovana ny mpiasa sy ny mpanjifa,
Tantano ny toerana azo antoka ary araho ny lalàn'ny faritra iasan'izy ireo.
Ny sampana tsirairay dia manana fahefana handà fahazoan-dàlana ho an'ny mpangataka manana isa ambany. Ny olona tsy manana fahazoan-dàlana DOR hivarotra marijuana dia mety tsy hivarotra, hizara, na hamindra marijuana, na hanana marijuana amin'ny tanjona hivarotana na hizarana azy, araka ny lalàna. Izay mandika izany fetra izany dia manao heloka amin'ny kilasy I.
Fahadisoana ao amin'ny Class B dia atao raha manana zavamaniry mihoatra ny 12 ny olona iray izay nahatratra ny dingana mamelana amin'ny fotoana iray, afa-tsy izay, raha toa ka mandray andraikitra hanafina ny isan'ny zavamaniry ananany ilay olona ary nametraka ilay olona rafitra fiarovana mba hampandrenesana azy amin'ny fisian'ny mpampihatra lalàna, fomba fampitahorana, na fandrika mety handratra na hahafaty olona manatona ny faritra misy ireo zavamaniry, dia meloka noho ny heloka bevava kilasy I ilay olona
Ny manamboninahitra rehetra, ny direktera, ny agents ary ny stockholand mitazona 5% na mihoatra ny tahirin'ny orinasa mangataka fahazoan-dàlana dia tokony hanaraka ny fepetra takiana momba ny fahazoan-dàlana voalaza ao amin'ny volavolan-dalàna.
Araka ny volavolan-dalàna, tsy misy fahazoan-dàlana omena izay olona ampiharina amin'ireto manaraka ireto:
Nomelohina noho ny asa ratsy nataony ity olona ity
Nomelohina noho ny heloka bevava mahery vaika ilay olona, ​​raha tsy nahazo famotsoran-keloka
Nandritra ny 3 taona lasa, ny olona dia nanolo-tena ho s. 51.20 noho ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina.
Ny olona dia mampiasa zava-pisotro misy alikaola na zavatra hafa arakaraka ny fahaverezan'ny fahaizany ara-dalàna. Ny olona iray dia heverina fa misotro zava-pisotro misy alikaola na zavatra hafa arakaraka ny fahalemen'ny fahaizany ara-dalàna raha toa ka mihatra amin'ireto 3 ireto ny iray amin'ireto manaraka ireto:
Ilay olona dia nanolo-tena amin'ny fitsaboana an-tsitrapo amin'ny s. 51.45
Ilay olona dia voaheloka noho ny fanitsakitsahana ny s. 941.20 (1) (b).
Amin'ny tranga 2 na maromaro izay nipoitra avy amin'ny tranga samihafa, dia hitan'ny fitsarana fa nanitsakitsaka lalàna iray momba ny DUI izy.
Ny olona dia manana fidiram-bola izay avy amin'ny filokana indrindra na voaheloka noho ny heloka 2 na mihoatra ny filokana.
Nomelohina noho ny heloka bevava tamin'ny fivarotan-tena.
Ilay olona dia voaheloka noho ny heloka bevava mifandraika amin'ny fampindramambola vola na zavatra sarobidy amin'ireo olona manana fahazoan-dàlana na fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny ch. 125.
Latsaky ny 21 taona ilay olona
Ilay olona dia tsy nipetraka tany Wisconsin nandritra ny 90 andro farafahakeliny talohan'ny datin'ny fangatahana.
Sarany momba ny fahazoan-dàlana
Araka ny volavolan-dalàna, ny olona tsirairay mangataka fahazoan-dàlana dia tokony handoa sarany 250 $ miaraka amin'ilay fangatahana.
Ary koa, ny olona tsirairay omena fahazoan-dàlana dia tsy maintsy mandoa vola isan-taona amin'ny departemanta $ 2,000 raha mbola manana fahazoan-dàlana mety ilay olona.
Ny fahazoan-dàlana dia manan-kery mandritra ny herintaona ary azo havaozina, afa-tsy ny sampan-draharaha dia afaka manafoana na mampiato ny fahazoan-dàlana alohan'ny fotoana ivoahany.
Ny olona iray dia tsy manan-jo hamerina ny sarany aloa ao amin'ity zana-bola ity raha toa ka holavina, hofoanana na aato ny fahazoan-dàlan'ilay olona
Ny volavolan-dalàna dia mitaky ny DOR hamorona sy hitazona programa fisoratana marijuana ara-pitsaboana, izay ahafahan'ny olona manam-pahalalana mahazo kara-panondro sy hividy marijuana amin'ny toeram-pivarotana manana fahazoan-dàlana tsy mila mandoa ny vidin'ny varotra na hetra alefa amin'izany varotra izany.
Ny volavolan-dalàna dia mitaky ny DATCP hisoratra anarana ireo entity ho tetrahydrocannabinols (THC). Ny laboratoara dia tsy maintsy mizaha marijuana raha misy loto; fikarohana momba ny fampiasana marijuana ara-pitsaboana; ary manome fiofanana momba ny fambolena, fijinjana, fonosana, fametahana mari-pamantarana ary fizarana marijuana, fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana sy ny lisitra ary ny fikarohana momba ny marijuana ara-pitsaboana.
Ny volavolan-dalàna dia mandrara ny mpampiasa na ny olon-kafa hanao fanavakavahana asa amin'ny olona amin'ny alàlan'ny fampiasan'ilay olona na tsy fampiasana marijuana -na izay vokatra ara-dalàna hafa rehetra navoakan'ny mpampiasa mandritra ny ora tsy iasana, miankina amin'ny fanilikilihana sasany, ny iray amin'izany dia raha manimba ny fahafahan'ny tsirairay mihinana tsara ireo andraikitra mifandraika amin'ny asan'io olona io ny fampiasana.
Fanindroany izao i Sen. Melissa Agard manandrana mandany lalàna momba ny fananganana ara-dalàna an'i Marijuana, saingy na eo aza izany rehetra izany dia toa tsy mamiratra ny ho avy, satria ny filohan'ny maro an'isa ao amin'ny Senate Devin LeMahieu dia nilaza fa tsy ampy ny vato azon'ny Repoblika. mandany lalàna marijuana rehetra any amin'ny Antenimieran-doholona.
Ny fotoana no hilaza.
Raha mila torohevitra momba ny indostrian'ny rongony ianao dia aza misalasala mifandray aminay ary aza adino koa ny momba anay Sarintany fanamarinana marijuana izay ahafahanao mijery ny satan'ny lalàna ankehitriny any amin'ny fanjakana rehetra any Etazonia ary mahita ny lahatsoratray rehetra amin'ny tsirairay amin'izy ireo.
Tags:Legalization rongony 2021, Fanomezana ara-dalàna ny rongony Wisconsin